महिनावारी भएकी महिलाको प्याडबाट बन्छ राजधानीमा रक्सी !…(भिडियो सहित हेर्नुहोस) | Dainik Sanjal
Home रोचक महिनावारी भएकी महिलाको प्याडबाट बन्छ राजधानीमा रक्सी !…(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
काठमाडौं– के तपाईं राजधानी काठमाडौंका होटेलमा बसेर रक्सी पिउनुहुन्छ ? या सगुनको रुपमा घरेलु रक्सीको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस् । किनकी तपाईंले पिउने र सगुन ठान्ने रक्सी महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट बनेको हुनसक्छ ।
प्याड, छाला, पुरानो जुत्ता र चप्पल तथा प्लास्टिकबाट बनाइएको रक्सीले दिमाग, कलेजो र पेटमा गम्भीर असर पुर्याउने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यस्तो रक्सीमा कार्बन मनोअक्साइडको मात्रा बढी हुने भएकाले मानिसमा दिमागी क्यान्सर, फोक्सो, कलेजो तथा पेटको क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने धेरै सम्भावना हुन्छ ।
OMG हजुरको मुटु दरो छ भनेमात्र यो सर्प र गाईको को भिडन्त हेर्नुहोस भिडियो सहीत